Horudhac: Getafe vs Real Madrid… (Los Blancos oo galabta doonaysa inay sii dheereysato hoggaanka horyaalka La Liga) – Gool FM
Horudhac: Getafe vs Real Madrid… (Los Blancos oo galabta doonaysa inay sii dheereysato hoggaanka horyaalka La Liga)
Ahmed Nur January 2, 2022
(Getafe) 02 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa isku dayi doonta in ay sii xoojiso booskeeda kowaad ee kala saraynta horyaalka La Liga marka ay galabta oo Axad ah aado Coliseum Alfonso Perez si ay ula ciyaarto Getafe.
Los Blancos ayaa haatan siddeed dhibcood ka sarreysa kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka ee Sevilla, halka Getafe ay ku jiro kaalinta 16-aad, iyadoo dhibcaha la wadaagta kooxda kaalinta 18-aad fadhisa ee Alaves oo kulammo isku mid ah ay ciyaareen, waxaana ay wada leeyihiin min 15-dhibcood.
Garsooraha: Mario Melero (Spain)
Sabit Abdulai ayaa sii joogteyn doona maqnaanshihiisa kaddib dhaawac uu garoomada kaga maqnaa labadii bilood ee la soo dhaafay, Vitolo iyo Jose Macias ayaa sidoo kale shaki ku jiraa oo ka maqnaan kara kooxda martida loo yahay.
Jaime Mata ayaa ka soo laabtay ganaax, laakiin haatan Getafe ayaa lumisay daafaca dhexe ee Djene Dakonam oo ganaax ku maqan.
Dhinaca kale Kiisaska Korona ee kooxda Real Madrid ayaa u muuqda kuwo soo laabtay, iyadoo kooxda reer Spain ay ku dhawaaqday in xiddigaheeda kala ah Thibaut Courtois, Federico Valverde, Vinicius Junior iyo Eduardo Camavinga dhammaantood laga helay KOFID 19.
Marcelo, Luka Modric, Isco, Marco Asensio, Rodrygo, David Alaba, Gareth Bale iyo Andriy Lunin ayaa ugu yaraan ka soo laabtay kiisaskoodii Korona, halka Casemiro uu qaatay ganaax kulan ah.
Dani Carvajal ayaa weli shaki ku jiraa inuu ciyaari karo kulankan, maadaama uu la maqnaa dhaawac bowdada ah.
>- Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Getafe tartammada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa adkaatay siddeed ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga.
>- Kooxda Real Madrid ayaan la garaacin 16-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Getafe tartammada oo dhan.
>- Getafe ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaartay horyaalka La Liga meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Kooxda Getafe ayaan la garaacin shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Ligaha Spain.
Tababare Xavi oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona uu ku shaqeyn doono kulanka Mallorca
Horudhac: Mallorca vs Barcelona… (Kulanka oo uu hareeyey Korona Fayras, Barca oo doonaysa inay ku soo laabato waddada guusha ee horyaalka La Liga)